Yintoni ioyile ye-CBD? | Eyona mveliso ilungileyo ye-2021-Ivenkile ye-CBD ekwi-Intanethi
Yintoni ioyile ye-CBD? | Eyona mveliso ilungileyo yango-2021
Ioyile ye-CBD ayizukukwenza ube phezulu
Yeyiphi indlela ebalaseleyo yokuthatha ioyile ye-CBD?
Alithandabuzeki elokuba, ioyile ye-CBD kule mihla yenye yezona mveliso zithethwayo malunga nokuba sempilweni. Ukuba kunokwenzeka ukuba uhlala kwindawo apho ibisemthethweni, unokuba phantsi kwengcinga yokuba i-CBD ibonakala ngathi ikhona kuyo yonke indawo. Iinkampani zobuhle kunye nokunakekelwa kwezikhumba zibonelela ngobuso be-CBD kunye nomzimba, iindawo zekofu zibonelela ngee-latte ze-CBD kunye nezinye Ioyile ye-CBD iyonke imixube, ii-spas zibonelela ngobuso be-CBD. Kwaye wonke umntu ubonakala ngathi uyatya kwiigummies ze-CBD ukuya kwiziselo ze-CBD.
Kodwa nangona ioyile ye-CBD phantse kuyo yonke indawo kwihlabathi lempilo kunye nokuba sempilweni, abantu abaninzi basacinga ukuba i-CBD iyabhidisa, ngakumbi xa uzama ukuqonda indlela yokuyisebenzisa ngokuchanekileyo kunye nendlela yokuqinisekisa ukuba into abayithengayo ngokusemthethweni. Kodwa masibeke irekhodi ngqo malunga nale nto iphantse ineempawu zobugqi.
I-CBD ligama elifutshane le-cannabidiol, yindawo yeekhemikhali efumaneka kwisityalo seCannabis Sativa. Le nto yenzeka ngokwendalo kwaye ihlala isetyenziswa ngohlobo lweoyile ukwenza iimveliso ezininzi ezibangela imvakalelo yokuphumla kunye nokuzola. Nangona kunjalo ngokungafaniyo nomzala wayo, i-tetrahydrocannabinol (THC), esona sisithako sisebenzayo sentsangu, i-CBD ayisebenzi ngengqondo.
Hayi, ayizukuphakamisa. Isityalo se-cannabis Sativa sine-113 ye-cannabinoids. Ezi zibini zibaluleke kakhulu yi-CBD kunye ne-THC. I-THC yinto esebenzayo kwentsangu, eyona ikwenza uzive uchwayitile. Kwelinye icala, i-CBD yinxalenye yesityalo engasebenziyo, kwaye oko kuthetha ukuba awuyi kuba nasiphumo sovuyo kwaye awuyi kuziva uguqulwe okanye uhleli nangayiphi na indlela.
Nangona kunjalo, kunokubakho ngaphandle koku. Phantse i-5% yabasebenzisi banokuba neziphumo ebezingalindelekanga kwaye basabele ngendlela engathandekiyo kwi-CBD. Ngokwesiqhelo, liqela elinye labantu eliphendula ngokungathandekiyo kwizinto ezifana ne-acetaminophen okanye ibuprofen. Into ekucetyiswa ngayo kukuba nanini na usithatha esinye isongezelelo esitsha, kubandakanya neoyile ye-CBD, kufuneka uyenze ngokukhuselekileyo phantsi kweliso.
Into ebaluleke kakhulu kukuqinisekisa ukuba imveliso oyithengayo ivavanywa ziilebhu zomntu wesithathu ukuqinisekisa umgangatho. Kuya kufuneka uyazi ukuba i-FDA ayizilawuli iimveliso ze-CBD, ke kunokwenzeka ukuba imveliso oyithengayo inokuba namandla okanye ibe ne-THC. IDelta 8 THC iya kukwenza ube phezulu kwaye ubumbene ngokusemthethweni.
Sonke mhlawumbi siwavile amagama athi "hemp", "intsangu," kunye "ne-cannabis" enxulumene ngqo ne-CBD. Kodwa into ekufuneka siyicacisile kukuba isityalo seCannabis Sativa sineentlobo ezimbini eziphambili: intsangu kunye nehempe. Ngelixa zombini zine-CBD, kukho ipesenti ephezulu kakhulu ye-CBD kwi-hemp, ethi kwangaxeshanye ibe nenqanaba eliphantsi kakhulu le-THC (ngaphantsi kwe-0.3%). Nangona kunjalo, xa sisiva ngeoyile ye-hemp, ibhekisa kwioyile ekhutshwe kwimbewu ye-hemp. Ioyile ye-hemp ayiqulathanga naziphi na ii-cannabinoids. Ioyile ye-Hemp, nangona kunjalo, izele ngamafutha asempilweni kwaye ihlala isetyenziswa kwiimveliso zokhathalelo lolusu, ngenxa yezibonelelo zayo zokuthambisa.
Yinto exhomekeke ngokwenene kwinto ofuna ukuyifumana kwi-CBD kwaye uyenzela ntoni.
Umzekelo, abanye abantu abafuni ukuyithatha ngomlomo, ke baya kukhetha i-CBD, ngohlobo lwento yokuthambisa okanye cream. Oko kunokusetyenziswa kulusu kwaye ufumane isiqabu kwiimisipha, kumalungu kunye nakwimigqa.
Unako kwakhona vape ioyile ye-CBD, evelisa isiphumo esikhawulezayo, kodwa esona sihlala sincinci. Iziphumo zokutyhutyha umoya ziya kusiwa kwimizuzu eli-10, kodwa ziya kuphela malunga neeyure ezimbini.
Ukuba ulungile ngokuthatha ioyile ye-CBD ngomlomo, unokukhetha tinctures kunye nokutya. Bathatha ithutyana ukusebenza (ngaphezulu kwesiqingatha seyure) kodwa iziphumo zihlala iiyure ezine okanye ezintlanu. I-tincture ilulwelo kwaye uyibeka phantsi kolwimi lwakho. Ukuba awuyithandi incasa, nangona kunjalo, unokukhetha into etyiwayo njengegummy, icapsule, okanye imveliso ebhakwe njengeekuki okanye ii brownies. Nokuba yeyiphi indlela, uya kufumana izibonelelo ezintle ze-CBD.
egqithileyongeposi Previous:I-CBD kunye neswekile-Sebenzisa ioyile ye-CBD ekuvuseleleni iswekile yegazi | Eyona mveliso i-2021Okulandelayoelilandelayo:I-CBD kunye neMpilo